Ọtụtụ ndị nwere ike iche na Windows Media Player na-adịkwa ya ewu ewu ji nwayọọ nwayọọ na ma ọ bụghị kpamkpam ezi. The mmelite ọhụrụ na releases nyeere aka na-edebe ọkụ nke window mgbasa ozi ọkpụkpọ ndụ. E nwere nke ukwuu nke na ị pụrụ ime na gị windows media ọkpụkpọ. Right si akpọ iche iche iche iche nke faịlụ, na-agbanwe agbanwe ya akpụkpọ na na na wụnye dị iche iche tinye-ons. Windows Media Player apụtawo dị ka a ma ama audio / video njikwa na n'oge gara aga afọ ole na ole. The kasị nso-nso version bụ 12 nke nwere a ọnụ ọgụgụ nke na-akpali akpali atụmatụ rata ya ahịa. Ugbu a ma ọ bụrụ na ị na-aga imelite gị ochie Media Player, ebe a na-adị ngwa Atụmatụ na i kwesịrị ịtụle.
Part 1: 5 Atụmatụ maka Windows Media Player update
Nkebi nke 2: Olee otú ibudata Windows Media Player mmelite?
NDỤMỌDỤ 1: Update / download si ukara windows website
Windows Media Player bụ kpam kpam free software na i kwesịrị ịdị na-ele anya ruo ukara na website nke windows maka nbudata ya melite ma ọ bụ zuru ezu software. Biko gaa www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download ịhụ a ndepụta nke downloads na dị.
NDỤMỌDỤ 2: na-anọ na-amaghị aha
Mgbe ị na-wụnye Windows Media Player, ya site a NJ pụrụ iche maka kọmputa gị. Nke a ID-eji na ọtụtụ ebe na-ego maka njikọ gị. Ọ bụ ezie na ọkpụkpọ authorizes na ha na-adịghị-ọ bụla onye ọmụma ma e nwere mgbe ha nwere ike soro ihe ị na-ekiri. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ozi gị ihihi, mgbe ahụ, gbanyụọ nke a mma. Ị nwere ike gbanyụọ a mma si "Ngwaọrụ" menu. Ngwaọrụ Nhọrọ Player internet ntọala gbanyụọ "ekwe ka internet saịtị iche mata gị ọkpụkpọ".
NDỤMỌDỤ 3: Update / download codec
Ozugbo i emelitere gị Windows Media Player, ị kwesịrị ị na-elele maka faịlụ ụdị ọ na-akwado. Site ndabara, Windows Media Player anaghị akwado ọtụtụ iche iche nke faịlụ nke ị kwesịrị download a codec dị ka mma. A codec ihe ọ bụla ma ihe tinye-na na atụmatụ maka Windows Media Player nke na-enyere ya aka ịmata na-egwu a dịgasị iche iche nke faịlụ ndị ọzọ formats.
NDỤMỌDỤ 4: Windows Media Player: ike ngwaọrụ
Dị nnọọ nbudata Windows Media Player bụghị iji na-enwe ya zuru uru. Mkpa ka ị na-elele maka ndị ọzọ atụmatụ kwa. Anya maka ike ngwaọrụ ngwugwu nke e dere a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ na atụmatụ maka windows media ọkpụkpọ. Nke a na ndepụta atụmatụ nwere ike ịgụnye nhicha nke "na nso nso-eji" na audio / video converters. Ozugbo i arụnyere ndị a ike ngwaọrụ, ha ga-abụ dị a zoro ezo tree dị ka panel si ebe ị nwere ike ijikwa ha mfe.
NDỤMỌDỤ 5: Play naanị elu àgwà DVD na gị ọkpụkpọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka mma gị na onye ọrụ ahụmahụ na Windows Media Player, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ na-egwu na nke kacha mma àgwà video / audio maka gị. Ka a nhọrọ, họrọ "Ngwaọrụ" menu wee họrọ Nhọrọ. Họrọ DVD taabụ site na nke a window wee pịa na "mgbanwe" button. Họrọ "mgbanwe fim mgbochi" ma họrọ R si dropdown.
Windows Media Player na-eme launching ha mmelite na kwukwara atụmatụ na ahụhụ fixes. Ị nwere ike ịtọ gị mgbasa ozi ọkpụkpọ maka ma akpaka melite ma ọ bụ ị nwere ike ịlele maka mmelite aka na ibudata ya na gị onwe gị mma. Ka ibudata / imelite Windows Media Player, ị ga-ite ke dị ka "nchịkwa".
Biko soro nzọụkwụ n'okpuru ego maka Windows Media Player mmelite aka:
Nzọụkwụ 1: Mepee windows mgbasa ozi ọkpụkpọ site ma na ịpị ya shortcut ma ọ bụ site na mmalite menu. Ozugbo i meghere gị Windows Media Player, ịgbanwee gaa na ọbá akwụkwọ mode bụrụ na ị bụ ebre mode.
Nzọụkwụ 2: Site enyemaka menu, họrọ "Lelee maka mmelite" button. Ugbu a, ka ihe ọkpụkpọ na-akpaghị aka anya maka mmelite online.
Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ego maka mmelite aka oge ọ bụla, ị nwekwara ike ahọrọ "ego maka mmelite na-akpaghị aka." Aka nke a mma, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1: Mepee Windows Media Player si ma mmalite menu ma ọ bụ site shortcut. Ọ bụrụ na gị mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ ugbua oghe, mgbe ahụ, ịgbanwee gaa na "ọbá akwụkwọ mode".
Nzọụkwụ 2: Mepee "hazie" na mgbe ahụ họrọ "Nhọrọ".
Nzọụkwụ 3: Họrọ na "ọkpụkpọ" taabụ wee họrọ nkeji oge mgbe nke ị ga-achọ gị ọkpụkpọ ka ego maka mmelite n'okpuru "Lelee maka mmelite" nhọrọ. Ka ihe atụ: "Ozugbo a ụbọchị", ọ bụrụ na ị ga-achọ ego maka mmelite kwa ụbọchị.
The Top 5 DVD-ere Ọkụ Mmemme maka Windows
Ọ dịghị mmachi Ugbu a na-ege ntị Spotify Music site Spotify on Windows Phone
Olee otú Download na Wụnye Windows DVD Onye kere na PC (Ohere 8 gụnyere)
Otú nyefee Photos si iPhone ka Computer
> Resource> Windows> 5 Atụmatụ maka Windows Media Player update